Hianjera Noho Ny Sandam-Bolany Ve Ny Fitondrana Iraniana? · Global Voices teny Malagasy
Hianjera Noho Ny Sandam-Bolany Ve Ny Fitondrana Iraniana?
Voadika ny 05 Oktobra 2012 10:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, Français, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Nidina hatrany amin'ny ambany indrindra ny rial iraniana ny talata 2 Oktobra 2012, ary hita ho nisaritaka sy niraviravy tanana nanoloana ity tsunami ara-bola ity ny manampahefana Iraniana. Ny Sazy no lazainy ho tompon'antoka tamin'ny fijotson'ny volan'ny firenena rial ho tonga 34.500 rials ny takalon'ny dollar amerikana iray. Vao andro vitsy monja anefa, ny alahady, vao 29.500 no mahazo iray dollar.
Nametraka ny soniany tamina fanangona-tsonia ny mpanao lalàna Iraniana iantsoana ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad eo anoloan'ny parlemanta hanontaniana ny antony nahatonga ity fijotson'ny sandam-bola haingana dia haingana mahazo ny volan'ny firenena ity.
Mandritra izany fotoana izany ny filohan'ny Lapan'ny Varotra, Indostria, Harena an-kibon'ny Tany ary ny Fambolena, Yahya Al Eshagh, mampitaha ny krizy ara-bola amin'ny ady ka miteny hoe “voan'ny balafomanga ny kianjan'ny sandam-bola.” Ho valiny dia niaro ny politika ara-toekarenan'ny governemantany ny filoha iraniana, ka milaza fa manao “ady psikolojika” amin'i Iran ny fahavalom-pirenena.
Ny alarobia 3 Oktobra, nitokona ny tao amin'ny Bazarin'i Tehran noho ny fanoheran'ny mpivarotra sy mpitana tranombarotra ny fikorisan'ny sandam-bola.
Mandà ny fiakatry ny sadam-bola dollar i Ahmadinejad
Maro ny mpisera nizara ny tafatafa nifanaovana tamin'i Ahmadinejad tamin'ny Septambra 2012, naminavina fa hiakatra hatramin'ny 30.000 rials ny dollar, izay ohatra iray amin'ny ady psikolojika indrindra.
Hianjera ve ny fitondrana?
Miteny ny bilaogera Iraniana Azark [fa]:
Mihena isan'ora hatrany hatrany ny rial manoloana ny vola vahiny, tsy mbola nisy krizy tahaka ity… Misy vondron'olona iray ao amin'ny parlemanta miampanga an'i Ahmadinejad ho tafiditra ao amin'ity krizy ity, raha miampanga tsy misy porofo kosa ny manampahefana ao amin'ny governemanta, fa misy mafia ao amin'ny firenena tompon'antoka amin'ity fikorisan'ny rial ity. Nangina teo anoloan'ity raharaha ity kosa ny mpitari-tolona Iraniana, Ayatollah Khamenei, sy ny birao ao aminy. Maro ny mpanadihady no mihevitra ny ankivy amelezana ny programa nokleary Iraniana ho antony mahatonga ity krizy ity… ao amin'ny firenena izay tsy manana asa ny ankamaroan'ny [tokony] mpiasa ary fitakiana handoavana ny karamany no anton'ny fihetsiketsehana maro. Miha-mitombo ny fahantrana ao amin'ny fiaraha-monina, afa-mampiomana mialoha ve isika fa mety hampianjera ny Repoblika Islamika ny fikoroson'ny rial?
Darzarehbin manoratra [fa] amin'esoeso fa ao anatin'ny 40 taona dia hahita izao vaovao izao isika: “Ny banky foibe Iraniana dia manasa ny vahoaka hanakalo ho iray dollar ny 30 miliara rials”.
Manoratra ihany koa ny bilaogera [fa]:
Manantena aho fa ho voavaha haingana ity krizy ity, fa raha mbola mitohy izao toe-draharaha izao dia mety hipaka lalina any amin'ny fiaraha-monina… rehefa misy fifidianana ihany vao mba manopy maso ny olo-pirenena ny mpitarika Iraniana… Tsy manana hery hanovana ny hoaviny ny Iraniana ary tsy hita ny antoko mpanohitra. Matroka ny Hoavintsika ary mety hianjera ny zava-drehetra. Antenaiko ho diso aho amin'izany.
Greencity manoratra [fa]:
Mahari-pery ianao ry vahoaka Iraniana. Fantaro fa raha nitranga tany amin'ny firenenkafa ny toe-javatra tahaka izao dia mety ho efa nanao fihetsiketsehana ny vahoaka ary nametra-pialàna ny fitondrana.
Mandritra izany fotoana izany, miha-miady amin'ny fiainana ny Iraniana fa rendriky ny fanasaziana ny rial. Tsikaritra fa tahaka ny lasibatry ny famoretan'ny fitondrana sy ny fanasazian'ny firenen-dehibe hatrany ny Iraniana.